के सांसद बमध्वजले भने जस्तै अर्को निर्वाचनमा एमालेको ‘१५ सिट’ कट्दैन ? – मिलिजुली खबर
के सांसद बमध्वजले भने जस्तै अर्को निर्वाचनमा एमालेको ‘१५ सिट’ कट्दैन ?
काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद गंगा बहादुर दोङ ‘बमध्वज’ले आगामी निर्वाचनमा एमालेको १५ सिट नकट्ने टोकुवा गर्नुभएको छ । असारको अन्तिम दिन चौरीदेराली गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभामा बोल्ने क्रममा आफ्नो पार्टी माओवादीको विगत सम्झिँदै एमालेको पनि हालत त्यस्तै हुने दाबी गर्नुभएको हो ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा बहुमत सिट जीतेको माओवादी आफ्नो हैसियत कायम राख्न नसक्दा अहिले प्रत्यक्ष तर्फ ३६ सीटमा खुम्चिनु परेको भन्दै सांसद बमध्वज’ले एमालेले १५ सीट कटाउन नसक्ने जिकीर गर्नुभयो । सांसद बमध्वज’ले भनेका कतिपय कुरा आक्रोशमा बोलेको भएतापनि त्यसभित्र यर्थाथ पनि छन् ।
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फ १६५ सदस्य चयनका लागि दुई चरणमा २०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ मा सम्पन्न भएको माओवादी ३६ सीटमा सीमित भएको थियो । निर्वाचनमा माओवादी ओरोलो लाग्दै गर्दा एमाले उकालो चढ्दै थियो । फलस्वरुप एमालेको प्रत्यक्ष सीट ८० रह्यो । माओवादीलाई जिताउन एमाले र एमालेलाई जिताउन माओवादी कार्यकर्ताले भोट हालेका छन् । अर्थात् त्यो बेला पार्टी एकाता गर्ने गरी एमाले र माओवादी बीच चुनावी गठबन्धन बनेको थियो ।
निर्वाचित भएर सदनमा पुगेपछि आफ्नो जिल्लाको समस्याका विबयमा खरो ढंगले बोल्न नसकेको आरोप खेपिरहेका सांसद बमध्वजले चौरीदेराली गाउँपालिकाको गाउँसभामा एमाले र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ वटा निर्वाचन एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा प्रति तीब्र आक्रोश ब्यक्त गरे ।
उहाँले भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पटक पटक नाम उच्चारण गर्दै मोदीको भनेको जवानी र पानीलाई एमालेसंग तुलना गर्ने कोशिस गगर्नु भएको थियो । जवानी र पानीलाई आफ्नो भाषणमा पटक पटक दोहोर्याउनु भएका जवानी सम्हाल्न नसक्दा घरजम समेत हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद बमध्वजले कयौँ कुरा राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेर बोलेपनि आफ्नो अहमता देखाउन खोज्दा माओवादीको कन्तबिजोक भएको कुरालाई अन्य दलले पनि आत्मसात गर्न भने आवश्यक छ । ‘हामी आफ्नै कारण यो अबस्थामा खुम्चिएका हौँ ।अहिले एमालेमा पनि त्यहि अहमता देखिन्छ । यहि अवस्था भै राख्यो भने १५ सीट संख्या सांसद सदनमा पुग्ने छैनन्, सांसद बमध्वजले भन्नुभयो ।’
उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास बजेटमा समेत गोकुल बाँस्कोटाले हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘यो पटक मैले बजेटको ‘बि’ पनि उच्चारण गरेको छैन् । म धेरै आजीत बने, सबै बिकास बजेट गोकुल बाँस्कोटाले ल्याएको भनेर कु प्रचार गरियो । यसको परिमाण जनताले चुनावमा देखाईदिने छन्, सांसद बमध्वजले भन्नुभयो ।’
बमध्वज सांसद हुनुअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार थिए । उहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा तेस्रो हुनुभएको थियो ।
काभ्रेमा १८ जना निको भए, १६ जना थपिए
कांग्रेस-माओवादीलाई तह लगाउन महेश बस्नेतले सुरु गरे युथ फोर्सलाई तालिम